Living environment – The Ulwazi Programme
Sixoxisane noBaba uSithole owazalwa ngenyanga kaNhlolanja ngonyaka ka 1923. Usilandise ngokuthi imali babeyilondoloza kuphi zingakabikho izindawo noma izakhiwo zokulondoza imali, amabhange. Ezikhathini zakudala imali abantu babengenayo noma babengayazi kwaze kwafika abelungu okuyibo abafika nemali kuleli nokunye okuningi okwakungaziwa ezwenikazi laseAfrika. Abantu baseAfrika babezikhonzele noma babeziphilisa ngokuzilimela nokufuya. Imali abantu baqala ukuyithola ngokuthi bashintshane nabelungu ngemfuyo … Read more
Ukushintsha Kwesimo Sezulu, Sibusisiwe High School
Isimo sezulu esikhathini sakudala sasingafani nesamanje. Ilanga lalingashisi ngalendlela eselishisa ngalo futhi izimvula zazibakhona ngesikhathi esijwayelekile onyakeni. Esingakubala njengenkinga endaweni yaseMbumbulu kwakuwukuduma kwezulu. Lokhu kwakubangelwa izizathu eziningana njengokuthi abantu noma labo abangabelaphi bendabuko babekwazi ukuphehla imithi yabo bathumelane izulu kanye nalelo lemvelo. Kuthiwa uma izulu seliduma kwakuba nokuzamazekeka komhlaba.Okunye esingakubala ukuthi kwakwenza izulu lingafani nelamanje … Read more
Categories Environment Tags Indlela yokuphila, Living environment, Sibusisiwe High School